Zvishandiso Zvikamu Kugadziriswa - K-Tek Machining Co, Ltd.
K-Tek machining inotungamira subcontract mainjiniya kambani, inogadzira yakakosha chaiyo zvikamu & magungano ekumanikidza emhando yepamusoro, pamabhizimusi mazhinji ane nhaka yekugona. Isu tasimbisa isingaenzaniswi mukurumbira wekugadzirwa kwemhando yepamusoro kugadzirwa, kufemerwa hunyanzvi, mutengo-unoshanda mhinduro, uye vatengi. Isu tinobatanidza mainjiniya ane hunyanzvi & ane ruzivo nezvakanaka zvemhando, maindasitiri anozivikanwa maitiro, akaomarara manejimendi masisitimu, uye mamiriro-e-iyo-ekushandisa michina & tekinoroji.
PaK-Tek machining chinangwa chedu ndechekubatsira vatengi vedu kukura. Tinoita izvi nekuziva kuti chikamu chega chega chatinogadzira chiri chemhando yepamusoro chiripo pamusika nhasi. Mushure mezvose, iwe unoda yako yekupedzisira chigadzirwa kuti ive yakanakisa pamusika, handiti? Taura nesu kuti tione zvatinogona kuita kuti iwe uite kunyange zviri nani. "Zvakakosha mubhizinesi redu kuva nevatengi vakavimbika, vakavimbika uye vanoziva vanotitsigira isu nevatengi vedu."
Kambani yedu inogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, parizvino tine vashandi mazana maviri. Chigadzirwa yedu 20% aivigirwa kuJapan, 60% aivigirwa kuna Europe uye America, tinogona kukupa yepamusoro uye yemakwikwi mutengo. Zvinhu zvedu zvakajairika isimbi isina chinhu, aluminium, mhangura, yakaderera kabhoni simbi, mapurasitiki einjiniya uye mamwe marudzi esimbi simbi, isu tinogona zvakare kupa kupisa kurapwa uye kwakasiyana kwepamusoro kurapwa kwevatengi:
• Zingi yakanamirwa pamifananidzo (Nhema / Olive / Bhuruu /……)
.Thinda / Mhete matinji
Kuyera Kuyera Sisitimu
Isu tine chivimbo chekuti timu yedu ine hunyanzvi uye kugona kuyedza uye kuongorora ese maficha echinjiniya ekugadzira kuti tione kuti tinochengetedza zviyero zvepamusoro sekudiwa kwevatengi vedu. Dhipatimendi rekuongorora uye rekuyedza rine akasiyana siyana emhando yekudzora michina uye nzira kuti zviite izvi uye tinofara kupa chero chekuongorora nekuyedza nzira dzaunonzwa dzichidikanwa.
Chinangwa chedu: Kununura zvigadzirwa zvine zero kukanganisa kune edu ese vatengi. Isu tinoshuvira kuzadzisa zvese zvinodiwa zveese dhizaini. Kuunza icho chinangwa kuti chisvike, yedu chaiyo CNC Machining kambani inoramba ichivandudza mhando dzese masevhisi edu kune ariko uye emangwana vatengi. Isu tinoregedza yedu yakakosha sosi-vanhu vedu-kuti vanzwisise uye nekuvandudza maitiro edu mazuva ese.
CMM: Yedu ZEISS Coordinate Kuyera Mashini ndeyeCNC inodzorwa uye inocherekedza kuongororwa kwayo nekubata nechikamu uchishandisa mubato wekubata .This system inoshanda zvinogara zvakanaka kana ichitarisa lager zvikamu uye zvakaomarara maficha mukati mezvikamu.